Horudhac: Liverpool vs Fulham… (Reds oo qarka u saaran inay diiwaan geliso rikoor aysan marna ku riyoon) – Gool FM
(Liverpool) 07 Maarso 2021. Liverpool oo taariikh mugdi ah ku jirta ayaa maanta soo dhoweyneysa kooxda Fulham kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Reds ayaa kulankan Anfield kula ciyaari doonto naadiga London ka dhisan xilli ciyaartii ugu dambeysay ee ay garoonkeeda ku ciyaartay guuldarro kala kulantay Chelsea oo iyada caasimadda England ka dhisan.
Guuldarradii Liverpool kasoo gaartay Blues ayaa ahayd guuldarradii shanaad oo xiriir ah oo garoonkeeda kusoo gaartay si xiriir ah, waxaana ay feejignaan kaga jirtaa in kulankii lixaad oo xiriir ah ay garoonkeeda guuldarro kula kulanto.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 5:00 Galabnimo xilliga geeska Afrika.
Difaaca Turkiga ah ee Ozan Kabak ayaa shaki badan laga galinayaa inuu u ciyaaro Liverpool, balse waxaa la rajeynayaa inuu Nathaniel Phillips kusoo laabto safka Macallin Jurgen Klopp.
Mohamed Salah ayaa taam u ah ciyaartan inkastoo deg deg looga saaray kulankii Reds ay guuldarrada kala kulantay Chelsea.
Fulham macallinkeeda Scott Parker ayaa xaqiijiyay inaysan jirin dhaawacyo cusub oo kooxdiisa soo food saaray.
Xiddiga khadka dhexe ka ciyaara ee Tom Cairney iyo Goolhaye Marek Rodak ayaa ciyaartan dhaawacyo kala duwan ku seegaya.
Fulham ayaa lix guuldarro oo xiriir ah kaddib barbarro kusoo gabagabeysay ciyaartii ay Liverpool 1-1 la gashay is araggii hore ee labadan koox kaasoo dhacay bishii December ee 2020.
Guusha kaliya ee ay Cottagers Anfield kaga soo gaartay Liverpool waxay timid bishii May ee 2012 iyagoo guushaas ku qaatay gool kama’ ah oo uu iska dhaliyay Martin Skrtel.
Fulham ayaa dhalisay kaliya afar gool 18-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay booqatay Reds.
Liverpool ayaan shan guuldarrro oo xiriir ah kula kulantay garoonkeeda markii ugu horreysay taariikhda, waana kooxdii ugu horreysay ee iyadoo horyaalka difaacaneysa diiwaan galisa rikoorkaas liita.
Reds ayaa ku socota sagaal saacadood oo aysan gool ciyaar furan ah ku dhalin garoonkeeda sanadkan 2021, goolka ee ay garoonkeeda ku dhalisay waxa uu ahaa rigoore uu shabaqa ku riday Mohamed Salah ciyaartii ay Manchester City la ciyaareen.
Kooxda uu hoggaamiyo Jurgen Klopp ayaa guuldarreysatay dhammaan toddobadii kulan ee ugu dambeysay horyaalka oo hoggaanka laga qabtay, mana aysan helin wax dhibic ah iyadoo hoggaanka mar laga qabtay tan iyo barbarrihii Fulham ciyaar kusoo idlaatay 1-1.
Liverpool ayaa labo barbarro oo xiriir ah la gashay kooxaha horyaalka ku cusub fasalkan waxayna soo afjartay 18 guul oo xiriir ah oo ay ka heysatay kooxaha dhowaan soo dallacay.
Kooxda horyaalka difaacaneysa ayaa ku guuldarreysatay inay goolka koowaad ee ciyaarta ay dhaliso 11 ka mid ah 12-kii kulan ee ugu dambeysay Premier League.